Dowladda Kenya oo ka jawaabtay dacwaddii ay Soomaaliya u gudbisay QM – Hornafrik Media Network
Dowladda Kenya oo ka jawaabtay dacwaddii ay Soomaaliya u gudbisay QM
By Liibaan Nuur	 Last updated Oct 9, 2019
Saraakiil ka tirsan dowladda Kenya ayaa jawaab adag ka bixiyey dacwad ay dhowaan Soomaaliya u gudbisay hay’adda maamulka hawada ICAO ee Qaramada Midoobay.
Sarkaakiishan oo la hadlay wargeyska Daily Nation ayaa sheegay in aysan wax shaqo ah ku laheyn diyaaraddii siday Madaxweyneyaashii hore ee Galmudug iyo Koonfur Galbeed ee dhowaan ka degtay garoonka Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose.
Sidoo kale waxa ay saraakiishu sheegeen in Kenya ay u hoggaamsameyso xeerarka caalamiga ah, islamarkaan aysan marnaba ku xadgubeyn hawada Soomaaliya, xaqna ay u laheyd dowladda Soomaaliya in ay qabato diyaaraddaas hawadeedana ay difaacato.
Maalintii Sabtida ee bilaawgii todobaadkan ayaa diyaaradaas oo jabisay xayiraadii dowladda Soomaaliya waxa ay ka dagtay magaalada Kismaayo, waxaana jiray amar ay dowladdu ku mamnuucday diyaaradahii duulimaadyada tooskaa ku tagi jiray magaaladaas, kuwaas oo waajib looga dhigay in ay soo maraan magaalada Muqdisho.
Dowladda Soomaaliya oo ka carootay arrintaas ayaa hay’adda hawada ICAO ee Qaramada Midoobey ku dacweysay dowladda Kenya, oo ay ku eedeysay in ay ku soo xad gudubtay hawadeeda kuna tumanayso Kenya sharciga caalamiga ah ee duulimaadyada hawada.
Madaxweyne Xaaf muxuu ka yiri Guddiga Farsamadda Galmudug?
Soomaaliya oo laga xusay maalinta Boostada Adduunka